တရုတ် Richina - ပလတ်စတစ် Blade ကိုအတူတယ်လီစကုပ်မော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ
ပလတ်စတစ် Blade ကိုအတူတယ်လီစကုပ်မော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: HD206
ဦးခေါင်းပစ္စည်း: လူမီနီယမ်အလွိုင်း, ပလတ်စတစ်
extension အလျား: 920mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 280mm 205
ဒီအလင်း-အလေးချိန် ပလပ်စတစ် ကားနှင်းရေမှုတ်များ သင်ဆီးနှင်းအတွက်မှီဝဲမရအကူအညီနဲ့, သင့် agrage ၌၎င်း, သင်၏ကားများနှင့်ယာဉ်များ alll ၏ပင်စည်အတွက်, သင့်ရုံးမှာတဦးတည်းကိုစောင့်ရှောက်။ အဆိုပါအဘို့ခိုင်ခံ့လက်ကိုင်နှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဆောက်လုပ်ရေး တယ်လီစကုပ်ကားတစ်စီး နှင်းရေမှုတ်များ, အ ခရီးဆောင်ကားတစ်စီးဆီးနှင်းဂေါ်ပြား3ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသောအစိတ်အပိုင်းများမှဖြိုဖျက်နိုင်
ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားများအတွက်တယ်လီစကုပ် Poly ရေမှုတ်များ
ဆီးနှင်းဂေါ်ပြားတပ် ချ. အဘို့အဘက်စုံသုံး
အိတ်ဆောင် utility ကိုဆီးနှင်းဂေါ်ပြား, extension ကိုအရှည် 920mm, ပြိုကျအရှည် 710mm
PC ကိုဓါး, အရွယ်အစား 205 * 280mm
2 အပိုင်းပိုင်း Telescoping ဘဲဥပုံအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အတူလူမီနီယံလက်ကိုင် anodized
အဆင်ပြေပလပ်စတစ် D ကိုချုပ်ကိုင်ထား
စံပြပလတ်စတစ်အရေးပေါ်နှင်းရေမှုတ်များထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်တယ်လီစကုပ်နှင်းရေမှုတ်များရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ပလတ်စတစ်အော်တိုနှင်းရေမှုတ်များ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ဘီးနှင့်အတူ right-ထောင့်နှင်း Pusher
မေးလ်အမိန့်နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ